DEG-DEG-Kenya oo Shaacisay in ay Dileen Saraakiil Al-Shabaab ah -
War Maanta ka soo baxay Wasaaradda Dicaafa Kenya ayaa waxaa lagu Sheegay in Ciidankooda ay Howl Gal Ku dileen Shan ka mid ah Xagjirka Ciidanka Al-Shabaab Tiro kelana ay dhaawaceen ka did markii Shabaabka ay isku dayeen in ay dagaalamaan.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in Ciidanka KDF ay gacanta ku dhigeen Tiro Shabaab ah oo nool nool iyo Hub ubadan Qoriga AK47.
Wasiirka Wasaaradda Difaaca Kenya ayaa waxaa uu intaas warkiisa ku daray in Shantaas qof ee Al-Shabaabka ah ee Ciidankooda ay dileen labo ka mid ah ay yihiin Saraakiil,halka Sedaxda kale ay ahaayeen Ciidan in kastoo Magacyada Saraakiisha ladilay Aanay Wasaaradda Sheegin.
Howl galkan ayaa waxaa uu ka dhacay inta udhexaysa Gaarisa iyo Wajeer.
Falkan ayaa waxaa uu dhacay 31-12-2017 xili hayeen ah, warkana wuxuu soo baxay Maanta oo ay Taariikhda Ku beegantahay 1Janawari 2018.
Hoos ka Akhriiso War Saxaafadeed oo ku qoran Inglish.
Related Items:DEG-DEG:Kenya oo Shaacisay in ay Dileen Saraakiil Al-Shabaab ah, Featured